OnePlus wuxuu dammaanad ka qaadi doonaa taleefannada laga keeno Shiinaha | Androidsis
Eder Ferreno | | Mobiles, OnePlus
Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ee dadka isticmaala markay taleefannada ka iibsanayaan Shiinaha waa dammaanad qaad. Xaalado badan ma jiraan wax damaanad qaad ah haddii ay dhibaato ka timaado qalabka. OnePlus way ka warqabtaa tan, laakiin waxay raadinayaan inay soo bandhigaan isbeddellada ku saabsan arrintan. Maaddaama summaddu ay sidoo kale bixiso dammaanad ku saabsan taleefannadaas laga keeno Shiinaha.
Waxaa la ogaaday in shirkadda waxay siineysaa damaanad hal sano ah mobilada laga soo iibsado Shiinaha, soo dejin Markaa haddii ay dhacdo in laga iibsado Shiinaha taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'OnePlus', waa wax wanaagsan in la ogaado in dammiin noocan oo kale ah jiri doono. Haddii ay dhibaatooyin ka yimaadaan qalabka, waxaad aadi kartaa astaanta lafteeda.
Waa wax aan caadi ahayn suuqa, laakiin OnePlus lafteeda ayaa xaqiijineysa inay tani run tahay. Marka tani war wanaagsan ayey u tahay dadka isticmaala ee qorsheynaya inay Shiinaha ka iibsadaan mid ka mid ah qalabka soo saaraha caanka ah. In kastoo ay tahay inaad taas xasuusato taleefan laga iibsaday Yurub wuxuu leeyahay dammaanad labo sano ah.
Way fiicantahay in la ogaado in suurtagalnimada noocaas ah ay jirto. Halka xaalado badan kala duwanaanshaha qiimaha sidaas uma weyna si ay ugu qalanto iibsiga Shiinaha. Gaar ahaan maadaama xaaladaha qaarkood ay jiri karaan kharashyo dheeri ah oo loogu talagalay caadooyinka, taas oo taleefanka ka dhigaysa mid qaali ah dhamaadka.
OnePlus sidaas ayuu ku noqonayaa mid ka mid ah magacyada yar ee Waxay sidoo kale bixiyaan dammaanad ah wax ka iibsashada Shiinaha. Warka wanaagsan ee loogu talagalay isticmaaleyaasha dhowaan iibsaday moodel ama kuwa ku fikiraya inay sidaas sameeyaan. In kasta oo waqti kasta aad u baahan tahay inaad miciinsato dukaamo la isku halleyn karo, oo si rasmi ah ugu iibiya taleefannada astaanta.
Nooca Shiinaha ayaa leh waqti fiican, natiijooyinka wanaagsan ee dhamaadka-sare ee cusub, OnePlus 7 Pro, oo nooc gaar ah oo xadidan leh ayaa mar hore laga bilaabay Spain dhowaan. Nooc heer sare ah oo loogu yeero inuu noqdo iibiyaha ugu fiican, kaas oo ka caawin doona shirkadda ballaarinta caalamiga ah. Sideed u aragtaa go'aankan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus ayaa dammaanad ka bixin doona taleefannada laga keeno Shiinaha
Kooxda Honor Band 5 waxay la imaaneysaa Honor 9X